‘ စီရော်နယ်ဒို နေ့လည်စာ စားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရင် နိုးလို့ ပြောလိုက်ပါ ‘ လို့ ကြေကွဲစွာ အကြံပြု လိုက်တဲ့ #အီဗရာ - SPORTS MYANMAR
‘ စီရော်နယ်ဒို နေ့လည်စာ စားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရင် နိုးလို့ ပြောလိုက်ပါ ‘ လို့ ကြေကွဲစွာ အကြံပြု လိုက်တဲ့ #အီဗရာ
ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် စီ ရော်နယ်ဒို ဟာ စပိန် ထိပ်သီး ရီးယဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဆီ မပြောင်းရွှေ့ မီ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ ပတ်ထရစ် အီဗရာ နဲ့ သူဟာ နှစ်နှစ် ခွဲ အချိန် အထိ အတူ ကစား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အခုတော့ ဒီနွေ မှာ ဘောလုံး အား ကစားသမား အဖြစ် မှ တရားဝင် အနား ယူသွား ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ဘယ် နောက်ခံလူ ဟောင်း အီဗရာ က အသင်းဖော် စီ ရော်နယ်ဒို ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ် ပုံကို ပြန်ပြောင်း ပြောကြ သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
2006 ခုနှစ် တုန်းက မိုနာကို မှ ယူနိုက်တက် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ လာ ခဲ့တဲ့ အီဗရာ ဟာ စီ ရော်နယ်ဒို နဲ့ တူ နှစ် ရာသီ ခွဲ အတူ ကစား ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယား လိဂ် ဖလား သုံးကြိမ် နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် တစ်ကြိမ် တို့ကို ရယူ ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အခုတော့ လူမှု ကွန်ယက် ဖြစ်တဲ့ တွစ်တာ ပေါ်မှာ စီ ရော်နယ်ဒို ယူနိုက်တက် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ ခဲ့တဲ့ 16 နှစ်ပြည့် အမှတ် တရ post တစ်ခု ကို တွေ့ လိုက်တဲ့ အခါ အီဗရာ က အသင်းဖော် ဟောင်းကို ‘ Machine ‘ လို့ ခေါ်ဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် စီ ရော်နယ်ဒို ရဲ့ အိမ်က အစား အသောက် အကြောင်း ၊ အိမ်မှာ လည်း စက်ရုပ် တစ်ခု လို လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် တွေကို အမြဲ လိုလို လုပ်ဆောင် တက်တဲ့ အကြောင်း ကို အီဗရာ က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” သူ ( စီ ရော်နယ်ဒို ) ဟာ စက်ရုပ် တစ်ရုပ် လို ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ အိမ်ကို နေ့လည်စာ စားဖို့ လုံးဝ မသွားလိုက် ပါနဲ့ ၊ နောက်ထပ် လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် တစ်ခု ကို ရောက်သွား သလို ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော် တစ်ကယ် အကြံပေး ပါရစေ ။ သူ နေ့လည်စာ စားဖို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ရင် နိုး ဆိုပြီး ငြင်းလိုက်ပါ ”
” တစ်ခါ တုန်းက သူဟာ ‘ ပတ်ထရစ် ရေ ၊ လေ့ကျင့်ရေး အစီ အစဉ် ပြီးရင် အိမ် လာခဲ့ဦး ‘ လို့ ကျွန်တော့် ကို ခေါ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် သွားခဲ့ ပါတယ် ၊ လေ့ကျင့် ပြီးလို့ ကျွန်တော် ပင်ပန်း နေခဲ့တာ ပေါ့ဗျာ ”
” ကျွန်တော် တို့ နေ့လည်စာ စားဖို့ ခုံပေါ် ထိုင်လိုက် တဲ့ အချိန် ကျွန်တော့် အရှေ့ မှာ အသီး အရွက် အသုပ် တွေနဲ့ ကြက်သား ဟင်း ပလိန်း တွေကို တွေ့လိုက် ရတယ် ။ ပြီးတော့ သောက်ဖို့ ရေပဲ ရှိတာ ၊ ဖျော်ရည် မရှိ ခဲ့ဘူး ။ ကျွန်တော် လည်း ဆာနေ တော့ OK ပါတယ် ပေါ့ ”
” ကျွန်တော် တို့ စတင် စားသောက် ကြ ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ မှာတော့ ခန နေရင် အသားကြီး ငါးကြီး ဟင်း တစ်ခုခု တော့ လာလိမ့်မယ် လို့ တွေးနေ ခဲ့တာ ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် နိုးပါ ၊ ဘာမှ ရောက် မလာ ခဲ့ဘူး ”
” သူ စားလို့ ပြီးသွား တယ် ။ အဲ့တာ နဲ့ မတ်တပ် ထပြီး ဘောလုံး တွေကန် ၊ စကေး တွေ လေ့ကျင့် တော့တာ ပဲ ။ ပြီးတော့ ပြောလိုက် သေးတယ် ‘ ငါတို့ တစ်ချက် ထိ လေးတွေ ဆော့လိုက် ရအောင် ‘ တဲ့ ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဆက်စား လိုက်ဦးမယ် ဟ လို့ ပြောလိုက် တဲ့ အချိန် သူက ‘ နိုး ၊ နိုး ၊ လာပါ ဆော့ကြ ရအောင် ‘ လို့ ပြန်ပြော ခဲ့တယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ ဘောလုံး ကစား လို့လည်း ပြီးသွား ရော ၊ သူ က ရေသွား ကူး ရအောင် လို့ ဆက်ပြော ပါတယ် ။ ကျွန်တော် လည်း အိုကေ ပေါ့ ။ ကျွန်တော် တို့ ရေကူး ၊ ရေပူ ရေအေး နဲ့ ရေချိုး ပြီးမှ နေ့လည်စာ စားဖို့ ဖိတ်ကြား တဲ့ အစီအစဉ် ဟာ ကုန်ဆုံး ခဲ့ရ ပါတယ် ”
” ပြီးတာ နဲ့ ကျွန်တော် ပြောတာ ပေါ့ ‘ ခရစ္စတီယာနို ၊ ငါတို့ ဒီကို ဘာလို့ လာ ကြတာ လဲ ? ငါတို့ မနက်ဖြန် ပွဲ ရှိလို့ လား ? ဒါမှ မဟုတ် နေ့လည်စာ စားဖို့ အတွက် လား ? ပေါ့ ”
” အဲ့တာ ကြောင့် ခင်ဗျား တို့ကို ကျွန်တော် အကြံပေး နေတာ ပါ ။ အကယ်လို့ ခရစ္စတီယာနို က ခင်ဗျား တို့ကို သူ့အိမ် နေ့လည်စာ စားဖို့ ဖိတ်လို့ ရှိရင် နိုး လို့သာ ပြောလိုက် ပါတယ် ။ သူဟာ စက်ရုပ် တစ်ခု လို ပါပဲ ။ သူဟာ လေ့ကျင့်မှု တွေကို ရပ်တန့် လိုက်ဖို့ ဆန္ဒ ရှိသူ မဟုတ် ပါဘူး ” လို့ အီဗရာ က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
‘ စီရျောနယျဒို နလေ့ညျစာ စားဖို့ ဖိတျချေါရငျ နိုးလို့ ပွောလိုကျပါ ‘ လို့ ကွကှေဲစှာ အကွံပွု လိုကျတဲ့ #အီဗရာ
ပျေါတူဂီ လကျရှေးစငျ စီ ရျောနယျဒို ဟာ စပိနျ ထိပျသီး ရီးယဲ မကျဒရဈ အသငျး ဆီ မပွောငျးရှေ့ မီ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှာ ပတျထရဈ အီဗရာ နဲ့ သူဟာ နှဈနှဈ ခှဲ အခြိနျ အထိ အတူ ကစား ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
အခုတော့ ဒီနှေ မှာ ဘောလုံး အား ကစားသမား အဖွဈ မှ တရားဝငျ အနား ယူသှား ခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ ဘယျ နောကျခံလူ ဟောငျး အီဗရာ က အသငျးဖျော စီ ရျောနယျဒို ရဲ့ ကွိုးစား အားထုတျ ပုံကို ပွနျပွောငျး ပွောကွ သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
2006 ခုနှဈ တုနျးက မိုနာကို မှ ယူနိုကျတကျ ဆီ ပွောငျးရှေ့ လာ ခဲ့တဲ့ အီဗရာ ဟာ စီ ရျောနယျဒို နဲ့ တူ နှဈ ရာသီ ခှဲ အတူ ကစား ခဲ့ပွီး ပရီးမီးယား လိဂျ ဖလား သုံးကွိမျ နဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ တဈကွိမျ တို့ကို ရယူ ဆှတျခူး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အခုတော့ လူမှု ကှနျယကျ ဖွဈတဲ့ တှဈတာ ပျေါမှာ စီ ရျောနယျဒို ယူနိုကျတကျ ဆီ ပွောငျးရှေ့ ရောကျရှိ ခဲ့တဲ့ 16 နှဈပွညျ့ အမှတျ တရ post တဈခု ကို တှေ့ လိုကျတဲ့ အခါ အီဗရာ က အသငျးဖျော ဟောငျးကို ‘ Machine ‘ လို့ ချေါဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ စီ ရျောနယျဒို ရဲ့ အိမျက အစား အသောကျ အကွောငျး ၊ အိမျမှာ လညျး စကျရုပျ တဈခု လို လကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျ တှကေို အမွဲ လိုလို လုပျဆောငျ တကျတဲ့ အကွောငျး ကို အီဗရာ က ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” သူ ( စီ ရျောနယျဒို ) ဟာ စကျရုပျ တဈရုပျ လို ပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ အိမျကို နလေ့ညျစာ စားဖို့ လုံးဝ မသှားလိုကျ ပါနဲ့ ၊ နောကျထပျ လကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျ တဈခု ကို ရောကျသှား သလို ဖွဈသှား ပါလိမျ့မယျ ။ ကြှနျတျော တဈကယျ အကွံပေး ပါရစေ ။ သူ နလေ့ညျစာ စားဖို့ ဖိတျချေါ လိုကျရငျ နိုး ဆိုပွီး ငွငျးလိုကျပါ ”
” တဈခါ တုနျးက သူဟာ ‘ ပတျထရဈ ရေ ၊ လကေ့ငျြ့ရေး အစီ အစဉျ ပွီးရငျ အိမျ လာခဲ့ဦး ‘ လို့ ကြှနျတေျာ့ ကို ချေါခဲ့ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော သှားခဲ့ ပါတယျ ၊ လကေ့ငျြ့ ပွီးလို့ ကြှနျတျော ပငျပနျး နခေဲ့တာ ပေါ့ဗြာ ”
” ကြှနျတျော တို့ နလေ့ညျစာ စားဖို့ ခုံပျေါ ထိုငျလိုကျ တဲ့ အခြိနျ ကြှနျတေျာ့ အရှေ့ မှာ အသီး အရှကျ အသုပျ တှနေဲ့ ကွကျသား ဟငျး ပလိနျး တှကေို တှလေို့ကျ ရတယျ ။ ပွီးတော့ သောကျဖို့ ရပေဲ ရှိတာ ၊ ဖြျောရညျ မရှိ ခဲ့ဘူး ။ ကြှနျတျော လညျး ဆာနေ တော့ OK ပါတယျ ပေါ့ ”
” ကြှနျတျော တို့ စတငျ စားသောကျ ကွ ပါတယျ ။ ကြှနျတေျာ့ စိတျထဲ မှာတော့ ခန နရေငျ အသားကွီး ငါးကွီး ဟငျး တဈခုခု တော့ လာလိမျ့မယျ လို့ တှေးနေ ခဲ့တာ ပေါ့ ။ ဒါပမေယျ့ နိုးပါ ၊ ဘာမှ ရောကျ မလာ ခဲ့ဘူး ”
” သူ စားလို့ ပွီးသှား တယျ ။ အဲ့တာ နဲ့ မတျတပျ ထပွီး ဘောလုံး တှကေနျ ၊ စကေး တှေ လကေ့ငျြ့ တော့တာ ပဲ ။ ပွီးတော့ ပွောလိုကျ သေးတယျ ‘ ငါတို့ တဈခကျြ ထိ လေးတှေ ဆော့လိုကျ ရအောငျ ‘ တဲ့ ။ ကြှနျတျော ကတော့ ဆကျစား လိုကျဦးမယျ ဟ လို့ ပွောလိုကျ တဲ့ အခြိနျ သူက ‘ နိုး ၊ နိုး ၊ လာပါ ဆော့ကွ ရအောငျ ‘ လို့ ပွနျပွော ခဲ့တယျ ”
” ကြှနျတျော တို့ ဘောလုံး ကစား လို့လညျး ပွီးသှား ရော ၊ သူ က ရသှေား ကူး ရအောငျ လို့ ဆကျပွော ပါတယျ ။ ကြှနျတျော လညျး အိုကေ ပေါ့ ။ ကြှနျတျော တို့ ရကေူး ၊ ရပေူ ရအေေး နဲ့ ရခြေိုး ပွီးမှ နလေ့ညျစာ စားဖို့ ဖိတျကွား တဲ့ အစီအစဉျ ဟာ ကုနျဆုံး ခဲ့ရ ပါတယျ ”
” ပွီးတာ နဲ့ ကြှနျတျော ပွောတာ ပေါ့ ‘ ခရစ်စတီယာနို ၊ ငါတို့ ဒီကို ဘာလို့ လာ ကွတာ လဲ ? ငါတို့ မနကျဖွနျ ပှဲ ရှိလို့ လား ? ဒါမှ မဟုတျ နလေ့ညျစာ စားဖို့ အတှကျ လား ? ပေါ့ ”
” အဲ့တာ ကွောငျ့ ခငျဗြား တို့ကို ကြှနျတျော အကွံပေး နတော ပါ ။ အကယျလို့ ခရစ်စတီယာနို က ခငျဗြား တို့ကို သူ့အိမျ နလေ့ညျစာ စားဖို့ ဖိတျလို့ ရှိရငျ နိုး လို့သာ ပွောလိုကျ ပါတယျ ။ သူဟာ စကျရုပျ တဈခု လို ပါပဲ ။ သူဟာ လကေ့ငျြ့မှု တှကေို ရပျတနျ့ လိုကျဖို့ ဆန်ဒ ရှိသူ မဟုတျ ပါဘူး ” လို့ အီဗရာ က ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။